Ntucha Oke Mfe Na Nfe Egwu Ogwu
Images na-ekere òkè dị ukwuu n'iwepụta mma na itinye ọdịnaya. Ị nwere ike iche n'echiche na ọ ga - ewute gị ma ọ bụrụ na ị mepee ibe weebụ nanị iji zute nnukwu ederede ederede. Ihe ngosi, foto, ihe atụ tinyere ọtụtụ ndị na-ahụ maka ihe oyiyi ndị ọzọ na-eme ka ọdịnaya gị na-adọrọ mmasị n'anya. Na mgbakwunye na nke a, ha nwere ike ịbanye n'ọtụtụ okporo ụzọ (n'ụzọ doro anya site na nsonaazụ ọchụchọ foto) - windows cheap vps.
Otú ọ dị, Lisa Mitchell, Semalt Onye Ahịa Success Manager, na-echetara gị na ihe a nile nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị na-ebuli ihe oyiyi weebụ gị maka Google na ndị ọzọ search engines .
Ịhọrọ oyiyi zuru okè
Nzọụkwụ Otu: Jide n'aka na ọ dị mkpa - Niile webmasters aghaghị ịhụ na ebe nrụọrụ weebụ ha dị mkpa na itinye aka. Ahụhụ njirimara nke ọma ga-eduga n'ọtụtụ ọnụahịa dị elu, yabụ ị na-ahọrọ ọdịdị dị mkpa, ị nọ n'ụzọ ziri ezi.
Họrọ blog gị na ebe nrụọrụ weebụ na-eji ntụziaka ndị a:
Gbaa mbọ hụ na ihe oyiyi ahụ na-ejikọta na niche gị ma ọ bụ isiokwu
Họrọ ihe oyiyi na-emesi isi ihe ịchọrọ ịkwọ ụgbọala n'ụlọ.
Ihe oyiyi gị ga-eme ka nlele anya na ịgụ ihe kama imebi otu.
E wezụga nke ahụ, jide n'aka na ị zere iji ihe oyiyi ngwaahịa. Ndị a na-eme ka ibe weebụ gị dị ka ọnụọgụ, na-agwụ ike ma ghara itinye aka na ya. Dịka o nwere ike ịdị oke ọnụ iji nweta foto foto, ọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe ọjọọ ịre onye na-ese foto ọkachamara.
Nzọụkwụ abụọ: Inweta ihe oyiyi n'efu
Tụkwasị m obi; ị gaghị achọ ka a tụba gị ikpe. Dị ka ndị dị otú a, ọ dị mma mgbe niile na ị na-eji ihe oyiyi gị. Lee ụfọdụ ngwaọrụ ị nwere ike iji hazie ihe oyiyi gị.
Canva - gunyere ọbá akwụkwọ nke ihe oyiyi ngwaahịa tinyere ihe atụ na vektọ, nke ị nwere ohere iji mee ka eserese gị. Canva nwekwara nzacha yana obere aka atụmatụ maka nhazi ihe oyiyi.
Freepik - ngwá ọrụ a bụ ihe nchọgharị engine. Ọ ga-eji ọtụtụ narị puku ihe osise na-enye gị otu nke dabara na ọchụchọ gị kacha mma. Freepik bụ ezigbo akụ maka PSD, ihe atụ, akara ngosi, vektọ, na foto.
Google Images - ihe omuma a zuru oke ma kpachara anya na foto ndị nwebiisinka. Maka nke a, gbanwee nsonaazụ ọchụchọ site na ịhọrọ 'aha maka re-eji.'
Flickr - na nke a, jiri akara ikikere, onye ma ọ bụ onye ọ bụla na-abụghị nke azụmahịa iji zere njigide nwebisiinka.
Nweta faịlụ aha oyiyi nri
Ozugbo i mepụtara ọdịdị omenala, mgbe ahụ ezigbo ọrụ malitere. Nchịkọta njirimara na-amalite site na ị na-ahọrọ aha njirimara kwesịrị ekwesị. Ntak-a? Ọfọn, ha na-enyere gị aka ogo SEO. Lee faịlụ kachasị mma faịlụ aha ị kwesịrị itinye:
Jiri akwa dị ka onye na-ekewa okwu - emela ka ọ pụta ìhè n'ihi na a chọghị ha site na engines ọchụchọ. Maka Google, enweghị ọdịiche dị n'etiti 'image_file.jpg' na 'imagefile.jpg.'
Buru nkọwa na nkọwa - tinye ọtụtụ nkọwa dị ka i nwere ike.
Jiri mkpuru okwu mee ihe mgbe nile.
Aha na àgwà ọzọ
Ihe ederede alt ma ọ bụ tag tag na-ezo aka na àgwà ndị na-abanye na mkpado foto ahụ. Jiri nke a iji nye nkọwa ndị ọzọ banyere ihe oyiyi gị kpọmkwem ndị na-esonyeghị na faịlụ faịlụ ahụ.
Mee ka ọsọ weebụ gị dịkwuo elu site na ịkụda ihe oyiyi gị ka ọ bụrụ nke kacha nta. Adobe Photoshop, ImageOptim, JPEGmini na PunyPNG bụ ngwá ọrụ dị mma ị nwere ike iji maka nke a. Echefula iji nwaa Google-Page-Speed ​​Insights maka ịchọta eserese nke dọrọ ala ọsọ ọsọ gị.